Itoobiya oo Gantaalada lidka diyaaradaha geysay agagaarka biyo xireenka Wabiga Nile - Jowhar Somali news Leader
Home News Itoobiya oo Gantaalada lidka diyaaradaha geysay agagaarka biyo xireenka Wabiga Nile
Itoobiya oo Gantaalada lidka diyaaradaha geysay agagaarka biyo xireenka Wabiga Nile
Xiisadda u dhaxeysa Masar iyo Itoobiya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay cirka isku shareertay, kaddib markii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday in aysan dib u dhigi doonin buuxinta biyo xireenka weyn ee ay ka sameysatay Wabiga Nile.
Madaxweynaha Masar Abdel Fatah Al-Sisi ayaa amar ku siiyay Ciidamada qalabka sida ee Masar inay galaan feejignaantii ugu sareeyay.
Sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay gantaallo lidka diyaaradaha ah u daabushay agagaarka biyo xireenka, si ay isaga difaacdo, haddii Masar soo weerarto biyo xireenka.
Wada hadalada u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya ee ku saabsan biyo-xireenka laga dhisayo wabiga Blue Nile ayaa burburay bishii Maarso kadib markii dowladda Itoobiya ay diiday inay saxiixdo heshiis uu Mareykan soo agaasimay oo xukumaya biyo-xireenka, iyadoo sheegtay inay xaq u leedahay inay buuxiso biyo xireenkeeda xawaare u gaar ah.
Masar iyo Suudaan ayaa si xooggan uga soo horjeestay qorshaha Itoobiya ee ay iskeed biyo xireenka u buuxsaneyso, iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin.
Xukuumadda Qaahira ayaa ka walwalsan inuu hoos u dhaco biyaha wabigo Nile, taasoo sababi karta abaar iyo macaluul, maadaama dadka Masar badi ay ku tiirsan yihiin biyaha wabiga Nile.
Sii hayaha Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya Amsalu Tizazu oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dowladda ayaa sheegay in aysan waajib ku aheyn inay ogeysiiyaan Masar iyo Sudan waqtiga biyo xireenka la buuxin doono
Itoobiya ayaa qorshaynaysa inay bilowdo buuxinta biyo xireenta bisha July ee soo socota, waxaana Wasiirka Arrimaha Dibadda Gedu Andargachew uu sheegay in dalkiisa aanu u arkin sabab uu dib ugu dhigo buuxinta biyo xireenka.